5ta ciyaartooy ee ugu qaalisan horyaalka Premier League ayaa ka soo kala jeeda kooxaha… – Hagaag.com
Posted on 28 Luulyo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Horyaalka Premier League waa mid ka mid ah horyaalada ugu xoogan uguna qanisan qaarada Yurub, kooxaha sida Liverpool, Manchester City iyo Tottenham ayaa leh laacibiinta ugu qaalisan adduunka.
Wargeyska Isbaanishka ee “Marca” wuxuu isha ku hayey 5ta ciyaartoy ee ugu qaalisan Premier League, marka loo eego “suuqa kala iibsiga” wargeyska Marca ee ku takhasusay dhaqaalaha kubada cagta, iyo go’aaminta qiimaha suuqa ee ciyaartoydu ayaa u soo saaray liiska sida soo socota:
Raheem Sterling (128 milyan oo euro):
Xiddiga reer England iyo kooxda Man City ayaa xilli ciyaareedkan u aheyd xilli ciyaareed gaar ah oo fiican, wuxuu ciyaaray 50 kulan tartamada oo dhan, isku celcelis ahaan 3816 daqiiqo, waxaana uu dhaliyey 30 gool iyo 9 baas oo xasaassi aheyd.
Tan iyo markii Sterling uu City kaga soo biiray Liverpool sanadkii 2015, waxa uu ciyaaray 241 kulan, waxa uu dhaliyay 99 gool iyo 74 baas oo khatar ah, waxaase cajiib ah qiimaha suuqa uu haatan ku leeyahay ayaa 3 jibaar ka badan tahay lacagta City ay kala soo wareegtay Reds.
Sadio Mane (120 milyan euro):
Xiddiga reer Senegal ayaa gacan ka geystey in kooxdiisa Liverpool loo caleemo saaro horyaalnimada Ingriiska, waxaana xilli ciyaareedkan uu dhaliyay 22 gool marka lagu daro 12 baas oo muhiim ah oo uu bixiyey, asaga oo ciyaaray 3720 daqiiqo oo 47 kulan tartamada oo dhan.
Mane wuxuu ciyaaray 170 kulan tan iyo markii uu kusoo biiray Liverpool 2016, wuxuu dhaliyay 81-gool, iyadoo 34-kalena uu baasay, waxaa qiimihiisa kor u qaaday labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay oo si aad ah u kordhay qiimahiisa iyadoo ku korortay 80 milyan oo euro marka loo fiiriyo lacagta ay Liverpool bixisay markii ay la soo saxiixatay.
Mohamed Salah (120 milyan euro):
Xiddiga reer Masar ayaa dhaliyay 23 gool 47 kulan uu saftay xilli ciyaareedkii hore, isaga oo siiyay asxaabtiisa 13 baas oo muhiim ah, wuxuu muujiyey horumar weyn tan iyi intii uu kaga soo biiray Liverpool dhinaca kooxda Roma 2017 adduun gaaraya 42 milyan euro oo keliya.
Salah wuxuu noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan Horyaalka Ingiriiska iyo adduunka kadib xirfadiisa cajiibka ah ee uu ku soo muujiyey Reds, mudadii uu la joogay wuxuu ciyaaray 152 kulan, wuxuu dhaliyay 94 gool, 41 baas oo muhim ah ayuu bixiyey.
Harry Kane (120 milyan euro):
Waa gooldhaliyaha ugu horreeya ee kooxda Tottenham iyo xulka qaranka England, in kasta oo uu ka soo laabtay dhaawac, haddana waxa uu qeyb muhim ah ka ahaa u soo bixida kooxdiisa tartanka Europe League goolkii uu dhaliyey kulankii ugu dambeeyay ee ay la ciyaareen Crystal Palace.
Ken ayaa Tottenham uga qeybgalay 287 ciyaarood, isaga oo dhaliyay 188 gool, sidoo kale wuxuu bixiyey 30 baas oo muhim ah.
Kevin de Bruyne (120 milyan euro):
Xiddiga reer Belguim ayaa ah mid ka mid ah tiirarka uu Pep Guardiola ku dhisay kooxda Manchester City, waana ciyaaryahanka kaliya ee gaaray guulihii xiddigii hore ee xulka France Thierry Henry, isagoo dhaafay 20 baas oo muhiim ah hal xilli ciyaareed oo Premier League ah.
De Bruyne ayaa ka qeyb qaatay 220 kulan oo uu u saftay Manchester City oo uu u dhaliyay 56 gool, waxaana uu leeyahay 89 baas oo khatar aheyd.